I-Netherdykes Hideaway log cabin - I-Airbnb
I-Netherdykes Hideaway log cabin
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCharmaine And Jonathan
UCharmaine And Jonathan yi-Superhost
IFilteraway yindlu yamaplanga yokupheka kuMzantsi Ntshona weScotland. Ilungele ikhefu elifutshane labantu abathandanayo okanye uhambo olude ukuze ufumane okungakumbi ngezinto ezifumaneka eScotland. Ime kufutshane neGalloway Forest, ipaki yokuqala emnyama yase-U.K.
Ngelishwa asizamkeli izilwanyana zasekhaya .
Ayikho i-wifi kodwa ungathatha i-4g kwindlu yamaplanga .
Indawo efihlakeleyo yindlu yamaplanga entle. Ifakwe ngokupheleleyo ikhitshi , into yokupheka igesi, i-microwave, ioveni, iketile, i-toaster, nefriji/i-freezer. Uza kuba nazo zonke izinto zokupheka, iimbiza neepani zokupheka kwaye ukuba kuyimfuneko, nokubhaka. Zonke izinto zebhedi neetawuli ziyafumaneka de kuphele ixesha lokuhlala kwakho. Ngaphandle , uza kufumana umjikelo omangalisayo, itafile yepikiniki, i-chimnea kunye nendawo yokoja .
4.86 · Izimvo eziyi-259
Ukuze ufike eLoch, phuma kwiingcango zeveranda uze ulandele indlela esecaleni kodonga lwamatye ngasekunene kwakho usiya esangweni. Emva kokuba ungene esangweni , ungatshintsha ngasekhohlo uze uhambe ebaleni ulandela impumlo yakho usiya kwiloft, okanye ungangena esangweni uze uqhubeke ulandela udonga ude ufike efama. Jika ngasekhohlo uze uye kweloch. Iibhutsi zibalulekile njengoko umhlaba uhamba nzima.
Ukuze sizibone bhetele iintaba kunye nendawo, sicebisa ukuba unyuke indlela yethu yokungena ukuya kwindlela ephambili, ujike ekunene uhambe endleleni. Thatha ekhohlo kwakho okokuqala, ngaphaya kwegridi uze uhambe ngendlela eya phezulu endulini ngasekunene kwakho. Umbono ongamele uphoswe .
UJ Sineencwadana ezahlukahlukeneyo kwindlu yamaplanga ukuze ucebe ukuhlala kwakho.
Ukusilela koko, nceda uzive ukhululekile ukujonga ezi webhusayithi zilandelayo
http://visitdumfriesandgalloway.co.uk/ ﻿ http://www.ayrshire-arran.co.uk/ ﻿ http://7stanesmountainbiking.com http://www.forestry.gov.gov/darkskygalloway
Umbuki zindwendwe ngu- Charmaine And Jonathan
Asithandi ukuphazamisa iindwendwe zethu xa zifikile size sizivumele zihlale ziyimfihlo . Indlu yethu ikwindawo ekufutshane ibe ukuba kukho nantoni na oyifunayo, nceda uzive ukhululekile ukuza endlini. Ukungena kwindlu yamaplanga kusetyenziswa indawo yokufaka izitshixo kumnyango wendlu yamaplanga. Siza kukuthumela i-imeyile okanye sikuthumelele ikhowudi ngaphambi kokuba ufike .
Asithandi ukuphazamisa iindwendwe zethu xa zifikile size sizivumele zihlale ziyimfihlo . Indlu yethu ikwindawo ekufutshane ibe ukuba kukho nantoni na oyifunayo, nceda uzive ukhulul…